Wasiirka Arrimaha Gudaha oo Beledweyne kula kulmay Saraakiisha Ciidamada | Dhacdo
Wasiirka Arrimaha Gudaha oo Beledweyne kula kulmay Saraakiisha Ciidamada
Wasiirka arrimaha gudaha dib-u-heshiisiinta iyo federaalka ee dowladda Soomaaliya Generaal Mukhtar Xuseen Afrax ayaa kulan is xog-wareysi ah la qaatay saraakiisha ciidamada qalabka sida gaar ah ciidamada xoogga dalka, kuwa Booliska maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada Beledweyne.
Kulanka oo looga hadlay xaaladaha ka taagan magaalada Beledweyne ayaa la isku raacay siddii la iskaga kaashan lahaa nabadda iyo xasiloonida gobolka Hiiraan.
Generaal Mukhtar Xuseen Afrax Wasiirka Arrimaha Gudaha XFS, oo warbixin guud ka dhegeystay laamaha amaanka gobolka hiiraan iyo kuwa degmada Beledweyne ayaa xoojiyey in muhiimadda koowaad la siiyo amaanka iyadoo la kaashanaayo bulshadda. Wasiirka ayaa sido kale kormeer ku saameeyey qaybo kamid ah xaafadaha magaaladda Beledweyne.
Dhanka kale shir ay maanta yeesheen Wasiirka Arrimaha Gudaha XFS iyo odoyaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa la isku raacay in maalinta berri ahay shirka ku soo biiraan madaxda Hirshabeelle eek u sugan magaalada Beledweyne oo ugu horreeyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo Guddoomiyaha Barlamaanka Hirshabeelle dr. Cabdixakiim Luqmaan Xaaji Muxumad.
Qaar ka mid Beelaha dega Gobolka Hiiraan ayaa si wayn uga soo horjeeda doorashadii dhawaan ka dhacday Magaalada Jowhar, waxaana ay muujinayaan gadood ku aadan arrintaasi.